महिनावारीको अवधिमा तीव्र कम्मर दुख्ने समस्या किन हुन्छ ? यस्ता छन्, ८ कारण – Etajakhabar
महिनावारीको अवधिमा तीव्र कम्मर दुख्ने समस्या किन हुन्छ ? यस्ता छन्, ८ कारण
ताजा खबर :- महिलाहरूलाई महिनावारी हुनु एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर कयौँ पटक यस अवधिमा निकै तीव्र दुखाई हुनथाल्छ । यसको पछाडी केही कारण हुन्छ, यदि यसलाई पहिचान गर्न सकेमा महिनावारीको दुखाई कम गर्न सकिन्छ ।
महिलाहरूको ओभरी(गर्भाशय)को इन्टरनल भागलाई एन्ड्रोमेट्रियम भनिन्छ । यदि महिनावारीको अवधिमा यसको केही भाग ओभरी, फैलोपियन ट्यूब या आन्द्रामा पुग्छ भने यसको कारण तीव्र कम्मर दुखाई हुनथाल्छ । चिकित्सकका अनुसार, महिनावारीको अवधिमा तीव्र कम्मर दुखाई हुनुको अन्य कारण पनि छन् ।
१-यदि कुनै महिलालाई कब्जियतको समस्या छ भने यसको कारणले महिनावारीको अवधिमा तीव्र कम्मर दुख्ने समस्या हुनसक्छ ।
२-महिनावारीको अवधिमा धेरै चिसो वा तातो चीजहरू खानुको कारणले तीव्र कम्मर दुख्ने समस्या हुनसक्छ ।
३-यदि कुनै महिलालाई पहिले देखि नै कमजोरीको समस्या छ भने महिनावारीको अवधिमा तीव्र कम्मर दुख्ने समस्या हुनसक्छ ।
४-हेभी ब्लिडिंगको कारण कयौँ पटक तीव्र कम्मर दुख्ने समस्या हुनसक्छ ।
५-जो महिलाहरू स्मोकिंग गर्छन, उनीहरूलाई यसको कारणले कयौँ पटक तीव्र कम्मर दुख्ने समस्या हुनसक्छ ।
६-फेमिली हिस्ट्रीमा कुनै महिलालाई तीव्र कम्मर दुख्ने समस्या छ भने बच्चालाई पनि यो समस्या हुनसक्छ ।
७-अस्वस्थकर आहार सेवन गर्दा कयौँ महिलाहरूलाई तीव्र कम्मर दुख्ने समस्या हुनसक्छ ।
८-ओभरीमा इन्फेक्शन हुनुको कारण महिनावारीको अवधिमा तीव्र कम्मर दुख्ने समस्या हुनसक्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २२, २०७४ समय: १५:५८:१५